Instinct Olga Buzovoy - nje Klondike for the rancorous! Cha, cha, futhi yebo, inkanyezi yangempela izoletha isimanga kubhalisile bayo. Futhi esikhundleni sezinhlelo eziningi zokukhangisa zogaxekile kulezi ziphakamiso kukhona ingxoxo yomunye ulahlekelwa yi-Buzovaya.
Ababhalisile ngesonto eledlule baxoxisane ngokukhululekile izindaba zakamuva ukuthi u-Olga Buzova ukhulelwe. Isizathu sokucabanga ngaleyo ndlela kwakungukuqashelwa okwakamuva kuka-Olga, lapho ebika ukuthi usekulungele ukuba umama futhi esebenza nendoda yakhe kulo magazini. Khuluma ngokukhulelwa kwakhe uBuzova uphuthunyiswe ngokuthumela isithombe se-microblog nentombazane ethatha isandla sakhe esiswini senkanyezi ye-TV.
Kodwa-ke, ngenkathi izingxoxo zihlala zingxoxwa: ku-Olga Buzovaya's Instagram, izithombe ezintsha zavela, lapho isibalo se "Doma-2" inkanyezi engashintshi.
Isigqoko se-Fur ngezicathulo: U-Olga Buzova uphuthumayo ababhalisile be-Instagram
Isikhathi esithile, inkanyezi ibhulogi ku-Instagram iye yaba yi-athikili ehlukile ye-celebrity celebrity. Izinkanyezi zisebenzisa amakhasi azo ukukhangisa imikhiqizo ethile, ukuthola imali enhle kubakhangisi ngalokho. Abanye abadumile bakhuluma ngokukhangisa kwi-intanethi ngokucophelela, benza ngokucophelela ukuhlonipha ngeposi. Abanye abakhathazeki ukubonisa ukucabanga kwabo ngokukhangisa umkhiqizo olandelayo. Umphathi we- "Doma-2" waqala ukukhangisa ezitolo eziningi zobuningi. Ekhasini lakhe ku-Instagram, u-Olga Buzova ugijimela ukubeka izithombe esitokisini sezinwele zokunethezeka. Inkanyezi yombukiso we-TV yayishesha kakhulu kangangokuthi ayizange ihlukumeze ngisho nokuthatha izingubo ezifanele zomkhiqizo okhangisiwe: izinyawo ezingenamikhono ziyizinyaweni ze-TV ye-TV!
Iphutha lemfashini labonakala ngokushesha ngabalandeli beBuvvvaya:
Izicathulo noma ingubo yoboya? Ingubo evulekile noma izicathulo? .... kodwa yebo ... Ngizobeka konke
I-valentina_surmi Indwangu ye-Fur nezidada ziyingqayizivele. Imali Olya yokukhangisa izothola, kodwa lokho okubukeka kunamahloni, ngakho akukhathazeki okuningi
anastasiya.starodubtseva Kuboya obufudumele nobugqila, i-fashionista
safonova.regina Izicathulo ezinamafutha - kuhle! Phezulu kwesitayela!
kondrashova_nadezhda Logic die.
Ingabe uLeonardo DiCaprio uyashada?
Deja vu: Buzova noBatrutdinov baphinda iseshini lesithombe seTarabuzikov
U-Alexei Vorobiev wabhekana namabutho amabi esitimeleni
Umakoti kaNicita Presnyakova wenza ucasulayo kwi-intanethi
I-Pugacheva inezinkinga ezinkulu zezempilo
Ukuncintisana kokuzivocavoca amandla okuqala
Isibindi sesibindi sesitayela saseBerlin
Kungenzeka yini ukuthi owesifazane abe yedwa?
I-pudding ye-chocolate ne-ayisikhilimu
Cordon Blue kusuka izinkukhu izinkukhu nge ham kanye ushizi
Ikhukhamba kanye isalaphu isaladi
I-Easter ku-sweet brewed
UBurito enenkukhu kanye nebheli pepper
Ukuthenga - ukuthembela noma indlela yokucindezeleka
Izifo ezivame kakhulu zendlebe phakathi kwabantu